UThixo Wethu Ongcwele: “Ungcwele, Ungcwele, Ungcwele UYehova” (Isaya 6) | Sondela
“Ungcwele, Ungcwele, Ungcwele UYehova”
1, 2. Nguwuphi umbono awawufumanayo umprofeti uIsaya, yaye usifundisa ntoni ngoYehova?
UISAYA wakhwankqiswa ngumbono owawuphambi kwakhe—umbono ovela kuThixo. Wawubonakala ungowokoqobo! Kamva uIsaya wabhala wathi eneneni ‘wambona uYehova’ esetroneni Yakhe ephakamileyo. Umwunduzo kaYehova wawuzalise itempile enkulu yaseYerusalem.—Isaya 6:1, 2.
2 Kwakhona uIsaya wakhwankqiswa nakoko wakuvayo—ukucula ngehlombe ngokokude iziseko zetempile zishukume. Le ngoma yayiculwa ziiserafi, izidalwa zomoya zodidi oluphakame kakhulu. Olu ncuthu lwengoma lwalunamazwi azukileyo athi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uYehova wemikhosi. Buzalise umhlaba wonke ubuqaqawuli bakhe.” (Isaya 6:3, 4) Ukuliphindaphinda kathathu igama elithi “ungcwele” kweli culo kwaligxininisa ngokukhethekileyo yaye kwakufanelekile oko, kuba uYehova ungcwele ngomlinganiselo ophakame gqitha. (ISityhilelo 4:8) Ubungcwele bukaYehova bubalaseliswa kuyo yonke iBhayibhile. Kukho amakhulukhulu eendinyana ezinxulumanisa igama lakhe kunye negama elithi “ungcwele” nelithi “ubungcwele.”
3. Iimbono eziphosakeleyo ngobungcwele bukaYehova zibakhokelele njani abaninzi ekubeni bamgatye uThixo kunokuba basondele kuye?
3 Ngoko ke, ngokucacileyo enye yezona zinto ziyintloko uYehova afuna siziqonde ngaye yeyokuba ungcwele. Ukanti, yona kanye loo ngcamango, ibadedisela kude kuye abantu abaninzi namhlanje. Abanye ngokungafanelekanga babunxulumanisa ubungcwele kunye nokuzenza ilungisa okanye intlonelo yenkwalambisa. Abantu abazijongela phantsi banokubufumanisa ubungcwele bukaThixo busoyikisa kunokuba bube nomtsalane. Basenokuba noloyiko lokuba abanakuze bakufanelekele ukusondela kulo Thixo ungcwele. Ngenxa yoko, abaninzi bayamgatya uThixo ngenxa yobungcwele bakhe. Kulusizi oko, kuba eneneni ubungcwele bukaThixo busisizathu esinamandla sokusondela kuye. Ngoba? Phambi kokuba siphendule loo mbuzo, masixubushe ngoko bukuko ubungcwele bokwenyaniso.
4, 5. (a) Libhekisela entwenini igama elithi ubungcwele, yaye alibhekiseli entwenini? (b) Ziziphi iindlela ezimbini ezibalulekileyo ‘ahlukaniswe’ ngazo uYehova?
4 Ukuthi uThixo ungcwele akuthethi ukuba uziphakamisile, unekratshi, okanye ubajongela phantsi abanye. Kunoko, uzithiyile ezo mpawu. (IMizekeliso 16:5; Yakobi 4:6) Ngoko, lithetha ntoni kanye kanye igama elithi “ungcwele”? NgokwesiHebhere seBhayibhile, eli gama lisuka kwigama elithi “ukwahlukanisa.” Elunqulweni, igama elithi “ngcwele” libhekisela ekwahlukanisweni kwento ukwenzela injongo ekhethekileyo, okanye ekugqalweni kwayo njengengcwele. Kwakhona ubungcwele bunengcamango yokuhlambuluka neyokusulungeka. Eli gama lisebenza njani kuYehova? Ngaba lithetha ukuba ‘wahlukanisiwe’ kubantu abangafezekanga, nto leyo ethetha ukuba ukude kuthi?
5 Akunjalo konke konke. ‘NjengaLowo Uyingcwele kaSirayeli,’ uYehova wazichaza njengalowo wayehleli “phakathi” kwabantu bakhe, nangona babenesono. (Isaya 12:6; Hoseya 11:9) Ngoko ubungcwele bakhe abumenzi abe kude kuthi. Ngoko, ‘wahlukaniswe’ njani? Ngeendlela ezimbini ezibalulekileyo. Okokuqala, wahlukanisiwe endalweni yonke ngokuba nguye kuphela ongOyena Uphakamileyo. Usulungeke yaye uhlambuluke ngokugqibeleleyo nangokungenasiphelo. (INdumiso 40:5; 83:18) Okwesibini, uYehova wahlukaniswe ngokupheleleyo kuso sonke isono, yaye kuyakhuthaza oko. Ngoba?
6. Kutheni sinokukhuthazwa kukwahlukaniswa ngokupheleleyo kukaYehova esonweni?
6 Siphila kwihlabathi elingenabo ubungcwele bokwenyaniso. Yonke into eyenziwa libutho labantu elahlukanisiweyo noThixo ayihlambulukanga ngandlel’ ithile, idyojwe sisono nakukungafezeki. Sonke sifanele silwe nesono esinaso. Yaye sonke sisengozini yokonganyelwa sisono ukuba asilumkanga. (Roma 7:15-25; 1 Korinte 10:12) UYehova yena akakho sengozini elolo hlobo. Njengoko ahlukaniswe ngokupheleleyo esonweni, akanakuze adyojwe nakancinane sisono. Oku kuqinisa intembelo yethu kuYehova njengoBawo ofanelekileyo, kuba kuthetha ukuba uthembeke ngokupheleleyo. Ngokungafaniyo noobawo abaninzi abangafezekanga abangabantu, uYehova akasayi kuze abe ngongendawo, oswele ukuziphatha, okanye oxhaphazayo. Ubungcwele bakhe benza ukuba naziphi na izinto ezinjalo zingabi nakwenzeka ngokupheleleyo. Ngezinye izihlandlo uYehova wayede afunge ngobungcwele bakhe, ukuqinisekisa ukuthembeka kwesifungo eso. (Amosi 4:2) Akukhuthazi na oko?
7. Kutheni kunokuthiwa ubungcwele buyinxalenye yobuntu bukaYehova?
7 Ubungcwele buyinxalenye yobuntu bukaYehova. Kuthetha ukuthini oko? Ukuzekelisa: Khawucinge ngegama elithi “umntu” nelithi “ukungafezeki.” Akunakuthetha ngomntu ngaphandle kokucinga ngokungafezeki. Ukungafezeki kubalasele kuthi yaye kuphembelela yonke into esiyenzayo. Ngoku khawucinge ngamagama amabini ahluke ngokupheleleyo—“uYehova” nelithi “ngcwele.” Ubungcwele bubalasele kuYehova. Uhlambulukile, usulungekile, yaye uthe tye ngandlela zonke. Asinakuze simazi ngokwenene uYehova ngaphandle kokucinga ngeli gama libalulekileyo—elithi “ungcwele.”
8, 9. Yintoni ebonisa ukuba uYehova uyabanceda abantu abangafezekanga ukuba babe ngcwele ngengqiqo elinganiselweyo?
8 Ekubeni ubungcwele buluphawu olubalaseleyo lukaYehova, kunokutshiwo ngokufanelekileyo ukuthi ungumthombo wabo bonke ubungcwele. Akalugogotyi ngokuzingca olu phawu luxabisekileyo; wabelana ngalo nabanye, yaye ukwenza oko ngesisa. Kaloku, xa uThixo wasebenzisa ingelosi ukuthetha kuMoses etyholweni elivuthayo, kwanomhlaba olingqongileyo waba ngcwele ngenxa yokuba uYehova wayelapho!—Eksodus 3:5.
9 Ngaba abantu abangafezekanga banako ukuba ngcwele ngoncedo lukaYehova? Ewe, ngengqiqo elinganiselweyo. UThixo wanika abantu bakhe uSirayeli ithemba lokuba ‘luhlanga olungcwele.’ (Eksodus 19:6) Walusikelela olo hlanga ngenkqubo yonqulo eyayingcwele, ihlambulukile, yaye isulungekile. Ngoko ubungcwele babuyinto ephambili eMthethweni kaMoses. Kaloku, umbingeleli omkhulu wayefaka ipleyiti yegolide ngaphambili elunkontshweni lwakhe, ukuze bonke bayibone xa imenyezela ekukhanyeni. Kuyo kwakukrolwe amagama athi: “Ubungcwele bobukaYehova.” (Eksodus 28:36) Ngoko unqulo lwabo lwalumele luhlambuluke yaye lusulungeke ngomlinganiselo ophakamileyo, eneneni, lube yindlela yabo yokuphila. UYehova wathi kubo: “Yibani ngcwele, kuba mna Yehova Thixo wenu ndingcwele.” (Levitikus 19:2) Logama nje amaSirayeli ayephila ngokuvisisana nesiluleko sikaThixo ngokomkhamo onokufikelelwa ngabantu abangafezekanga, ayengcwele ngengqiqo elinganiselweyo.
10. Ngokuphathelele ubungcwele, nguwuphi umahluko owawukho phakathi kukaSirayeli wamandulo kunye neentlanga ezazimjikelezile?
10 Oku kubalaseliswa kobungcwele kwakwahluke ngokupheleleyo kunqulo lweentlanga olwalujikeleze uSirayeli. Ezo ntlanga zobuhedeni zazinqula oothixo bobuxoki nabohanahaniso, oothixo ababechazwa njengabanogonyamelo, abanyolukileyo nabaziphethe kakubi. Babengekho ngcwele ngandlela zonke. Unqulo lwabo thixo lwabenza abantu ababa ngcwele. Ngoko, uYehova wabalumkisa abakhonzi bakhe ukuba bazahlukanise nabanquli bobuhedeni noqheliselo lwabo lonqulo oludyobhekileyo.—Levitikus 18:24-28; 1 Kumkani 11:1, 2.
11. Ubungcwele bentlangano kaYehova yasezulwini bubonakaliswa njani (a) ziingelosi? (b) ziiserafi? (c) nguYesu?
11 Kwanokuba lwalunokwenza okusemandleni alo, uhlanga olunyuliweyo lukaYehova olunguSirayeli wamandulo lwalunokubonakalisa ubungcwele bentlangano kaThixo yasezulwini ngomlinganiselo nje omncinane. Izigidi zezidalwa zomoya ezimkhonza ngokuthembekileyo uThixo kubhekiselwa kuzo ngokuthi “amashumi amawaka angcwele.” (Duteronomi 33:2; Yude 14) Zikubonakalisa ngokugqibeleleyo ukuqaqamba nobuhle obusulungekileyo bobungcwele bukaThixo. Yaye khumbula iiserafi uIsaya awazibona embonweni wakhe. Umongo wengoma yazo ubonisa ukuba ezi zidalwa zomeleleyo zomoya zinendima ebalulekileyo ekwaziseni ngobungcwele bukaYehova kwindalo iphela. Noko ke, esinye kwezi zidalwa zomoya singaphezu kwazo zonke ezi—uNyana kaThixo okuphela kwamzeleyo. UYesu ububonakalisa ngeyona ndlela ibalaseleyo ubungcwele bukaYehova. Ngokufanelekileyo, waziwa ‘njengaLowo Ungcwele kaThixo.’—Yohane 6:68, 69.
Igama Elingcwele, Umoya Oyingcwele
12, 13. (a) Kutheni igama likaThixo lichazwa ngokufanelekileyo ngokuthi lingcwele? (b) Kutheni igama likaThixo limele lingcwaliswe?
12 Kuthekani ngegama likaThixo? Njengoko sibonile kwiSahluko 1, elo gama alisosibizo okanye uphawu nje kuphela. Limela uYehova uThixo, nazo zonke iimpawu zakhe. Kungako nje iBhayibhile isithi ‘igama lakhe lingcwele.’ (Isaya 57:15) UMthetho kaMoses wawumbeka ityala lokufa umntu owayenyelisa igama likaThixo. (Levitikus 24:16) Yaye phawula into yokuqala uYesu awayikhankanyayo emthandazweni: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho.” (Mateyu 6:9) Ukungcwalisa into kuthetha ukuyahlula njengento engcwele yaye uyihlonele. Kodwa kutheni into esulungeke njengegama likaThixo kufuneka ingcwaliswe?
13 Igama elingcwele likaThixo liye lahlaselwa yaye langcoliswa ngobuxoki nangogculelo. E-Eden, uSathana waxoka ngoYehova ngelithi unguMongami ongenako okusesikweni. (Genesis 3:1-5) Ukususela ngoko, uSathana—umlawuli weli hlabathi lingekho ngcwele—uye waqinisekisa ukuba buyanda ubuxoki ngoThixo. (Yohane 8:44; 12:31; ISityhilelo 12:9) Iinkonzo ziye zamchaza uThixo njengalowo ongqwabalala, okude kuthi, nokhohlakeleyo. Zithi zixhaswa nguye kwiimfazwe zazo zophalazo-gazi. Kunokuba zizukise uThixo ngezenzo zakhe ezimangalisayo zokudala, ngokufuthi zithi indalo yabakho ngamabona-ndenzile, okanye ngendaleko. Ewe, igama likaThixo liye lanyeliswa ngenkohlakalo. Limele lingcwaliswe; uzuko lwalo olufanelekileyo lumele lubuyiselwe. Siyakulangazelela ukungcwaliswa kwegama lakhe nokuthethelelwa kolongamo lwakhe, yaye siyakuvuyela ukuba nenxaxheba kuloo njongo izukileyo.
14. Kutheni umoya kaThixo ubizwa ngokuthi ungcwele, yaye kutheni ukunyelisa umoya oyingcwele kusisono esinzulu?
14 Kukho nenye into enxulumene ngokusondeleyo noYehova nayo ebizwa ngokuthi ingcwele—umoya wakhe, okanye amandla akhe asebenzayo. (Genesis 1:2) UYehova uwasebenzisa la mandla akhe agqithiseleyo ukuphumeza iinjongo zakhe. Konke oko uThixo akwenzayo, ukwenza ngendlela engcwele, esulungekileyo nehlambulukileyo, ngoko amandla akhe asebenzayo abizwa ngokufanelekileyo ngokuba ngumoya oyingcwele okanye umoya wobungcwele. (Luka 11:13; Roma 1:4) Ukunyelisa umoya oyingcwele, okubandakanya ukuchasa ngabom iinjongo zikaYehova, kusisono esingaxolelekiyo.—Marko 3:29.
Isizathu Sokuba Ubungcwele BukaYehova Busisondeza Kuye
15. Kutheni kufanelekile nje ukuba noloyiko lobuthixo ngobungcwele bukaYehova, yaye lubandakanya ntoni olo loyiko?
15 Ngoko, akukho nzima ukuqonda isizathu sokuba iBhayibhile inxulumanise ubungcwele bukaThixo kunye noloyiko lobuthixo. Ngokomzekelo, INdumiso 99:3 ifundeka ngokuthi: “Mazibonge igama lakho. Likhulu yaye liyoyikeka, lingcwele.” Noko ke, olu loyiko asikuko ukuba nedyudyu. Kunoko, luyingcamango yoloyiko lwentlonelo enzulu, intlonelo epheleleyo. Kufanelekile ukuvakalelwa ngaloo ndlela, ekubeni ubungcwele bukaThixo bukumlinganiselo ophakame kakhulu kunathi. Buhlambuluke ngokuqaqambileyo, yaye buzukile. Sekunjalo, abufanele busidedisele kude kuye. Kunoko, ukuba nembono efanelekileyo ngobungcwele bukaThixo kuya kusisondeza kuye. Ngoba?
Njengoko ubuhle bunomtsalane kuthi, kufanele kube njalo nangobungcwele
16. (a) Ubungcwele bunxulumene njani nobuhle? Nika umzekelo. (b) Ukuchazwa kukaYehova kwasembonweni kukubalaselisa njani ukuhlambuluka, ukusulungeka nokukhanya?
16 Phakathi kwezinye izinto, iBhayibhile ibunxulumanisa ubungcwele kunye nobuhle. KuIsaya 63:15, izulu lichazwa ‘njengendawo yokuhlala ephakamileyo kaThixo yobungcwele nobuhle.’ Ubuhle bunomtsalane kuthi. Ngokomzekelo, khawujonge umfanekiso okwiphepha 33. Ngaba akuziva utsalelekile kuloo mfanekiso? Yintoni ewenza ube nomtsalane kangako? Khawujonge indlela acwenge ngayo loo manzi. Kwanomoya umele ukuba ucocekile, kuba isibhakabhaka siluhlaza yaka nokukhanya kuqaqambile. Ngoku, ukuba lo mfanekiso ubunokutshintshwa—la manzi azaliswe bubumdaka, imithi namatye arhoqozwe, umoya uzaliswe ngumsi—besingayi kuba saziva sitsalelekile kuwo. Ngokuqhelekileyo ubuhle sibunxulumanisa nokucoceka, ukuhlambuluka nokukhanya. Kwala mazwi manye asenokusetyenziswa ukuchaza ubungcwele bukaYehova. Kungenxa yoko le nto ukuchazwa kukaYehova embonweni kusichulumancisa. Ukukhanya kwakhe ngokuqaqambileyo, ukukhazimla kwakhe njengamatye anqabileyo, ukuqaqamba kwakhe njengomlilo okanye njengesona sinyithi sixabisekileyo esisulungekileyo nesikhazimlayo—yindlela leyo amhle ngayo uThixo wethu ongcwele.—Hezekile 1:25-28; ISityhilelo 4:2, 3.
17, 18. (a) Ekuqaleni uIsaya wachatshazelwa njani ngumbono wakhe? (b) UYehova wayisebenzisa njani iserafi ukuthuthuzela uIsaya, yaye kwakubaluleke ngantoni oko kwenziwa yiserafi?
17 Noko ke, ngaba ubungcwele bukaThixo bufanele busenze sizive siphantsi kunaye? Ngokucacileyo, impendulo ithi, ewe. Ngapha koko, siphantsi kakade kuYehova—kunjalo nje siphantsi kakhulu kuye. Ngaba ukwazi oko kufanele kusahlukanise naye? Phawula indlela awasabela ngayo uIsaya xa weva iiserafi zibhengeza ubungcwele bukaYehova. “Ndaza ke ndathi: ‘Yeha ke mna! Kuba ndisuke ndanjengosikwe umlomo, ngenxa yokuba ndingumntu omilebe ingahlambulukanga, yaye ndihlala phakathi kwesizwana esimilebe ingahlambulukanga; kuba amehlo am abone uKumkani, uYehova wemikhosi, ngokwakhe!’” (Isaya 6:5) Ewe, ubungcwele bukaYehova obungenasiphelo bamkhumbuza uIsaya ngendlela anesono nangafezekanga ngayo. Ekuqaleni, loo ndoda yokholo yaphelelwa ngamandla. Kodwa uYehova akazange ayiyeke kuloo meko.
18 Iserafi yamthuthuzela ngokukhawuleza lo mprofeti. Njani? Eso sidalwa someleleyo somoya saphaphazela saya esibingelelweni, sathabatha ilahle kuso, saza sachukumisa ngalo imilebe kaIsaya. Oko kusenokubonakala kubuhlungu kunokuba kuthuthuzele. Noko ke, khumbula ukuba lo yayingumbono, owawunentsingiselo yokomfuziselo. UIsaya, owayengumYuda othembekileyo, wayesazi kakuhle ukuba imibingelelo yayisenziwa mihla le esibingelelweni setempile ukuze kucanyagushelwe izono. Ngoko le serafi yayimkhumbuza ngokunothando lo mprofeti ukuba nangona eneneni wayengafezekanga, ‘enemilebe engahlambulukanga,’ wayesenako ukuba nokuma okuhlambulukileyo phambi kukaThixo. * UYehova wayekulungele ukumgqala njengongcwele umntu ongafezekanga nonesono—ubuncinane ngengqiqo elinganiselweyo.—Isaya 6:6, 7.
19. Kunokwenzeka njani ngathi ukuba sibe ngcwele ngengqiqo elinganiselweyo, nangona singafezekanga?
19 Kuyafana ke nanamhlanje. Yonke loo mibingelelo eyayisenziwa esibingelelweni eYerusalem yayisisithunzi sento enkulu ngakumbi—umbingelelo omnye ogqibeleleyo, owanikelwa nguYesu Kristu ngowama-33 C.E. (Hebhere 9:11-14) Ukuba siguquka ngokwenene ezonweni zethu, silungise ikhondo lethu eliphosakeleyo, size sibonise ukholo kuloo mbingelelo, siyaxolelwa. (1 Yohane 2:2) Nathi sinokuba nokuma okuhlambulukileyo phambi kukaThixo. Ngoko, umpostile uPetros usikhumbuza esithi: “Kubhaliwe kwathiwa: ‘Nimele nibe ngcwele, ngenxa yokuba ndingcwele mna.’” (1 Petros 1:16) Phawula ukuba uYehova akakhange athi simele sibe ngcwele njengaye. Akaze alindele okungaphezu kwamandla ethu kuthi. (INdumiso 103:13, 14) Kunoko, uYehova uthi simele sibe ngcwele ngenxa yokuba yena ungcwele. “Njengabantwana abaziintanda,” sifuna ukumxelisa ngokusemandleni ethu njengabantu abangafezekanga. (Efese 5:1) Ngoko ukufikelela ubungcwele kufuna umzamo ongapheliyo. Njengoko sikhula ngokomoya, sizabalazela ‘ukugqibelelisa ubungcwele’ imihla ngemihla.—2 Korinte 7:1.
20. (a) Kutheni kubalulekile nje ukuqonda ukuba sinako ukuba ngabahlambulukileyo emehlweni oThixo wethu ongcwele? (b) Wachaphazeleka njani uIsaya akuqonda ukuba izono zakhe zazicanyagushelwe?
20 UYehova uyakuthanda oko kuthe tye nokusulungekileyo. Usithiyile isono. (Habhakuki 1:13) Kodwa akasithiyanga thina. Logama sisigqala isono ngendlela asigqala ngayo yena—sikuthiye okubi, sithande okulungileyo—size sizabalazele ukulandela amanyathelo agqibeleleyo kaKristu Yesu, uYehova uyazixolela izono zethu. (Amosi 5:15; 1 Petros 2:21) Xa siqonda ukuba sinako ukuba ngabahlambulukileyo emehlweni oThixo wethu ongcwele, oko kuba nemiphumo emikhulu kakhulu. Khumbula ukuba, ekuqaleni ubungcwele bukaYehova bamkhumbuza uIsaya ngokungahlambuluki kwakhe. Wadanduluka wathi: “Yeha ke mna!” Kodwa wathi akuqonda ukuba izono zakhe zazicanyagushelwe, yatshintsha imbono yakhe. Xa uYehova wacela itsha-ntliziyo lokuphumeza isabelo esithile, uIsaya waphendula ngokukhawuleza, nangona wayengazi ukuba sasibandakanya ntoni na. Wadanduluka wathi: “Ndikho! Thuma mna.”—Isaya 6:5-8.
21. Sisiphi isizathu sokuba nentembelo yokuba sinako ukuhlakulela uphawu lobungcwele?
21 Senziwe ngokomfanekiso kaThixo ongcwele, sanikwa imilinganiselo yokuziphatha kunye namandla okuziqonda izinto zokomoya. (Genesis 1:26) Ngoko sonke sinawo amandla okufikelela ubungcwele. Njengoko siqhubeka sihlakulela ubungcwele, uYehova uyakuvuyela ukusinceda. Ngaloo ndlela, siya kusondela ngakumbi kuThixo wethu ongcwele. Ukongezelela, njengoko siqwalasela iimpawu zikaYehova kwizahluko ezilandelayo, siza kubona ukuba kukho izizathu ezininzi ezinamandla zokusondela kuye!
^ isiqe. 18 Ibinzana elithi ‘imilebe engahlambulukanga’ lifanelekile, kuba imilebe idla ngokusetyenziswa eBhayibhileni ukufuzisela intetho okanye ulwimi. Kubo bonke abantu abangafezekanga, ukuba nesono kwabo kubonakala ubukhulu becala kwintetho yabo.—IMizekeliso 10:19; Yakobi 3:2, 6.
Levitikus 19:1-18 Ukuze ihambo yethu ibe ngcwele, yiyiphi eminye imigaqo esimele siyisebenzise?
Duteronomi 23:9-14 Ukuhlambuluka kobuqu kunxulumene njani nobungcwele? Oku kufanele kusichaphazele njani isinxibo nokuzilungisa kwethu kwakunye nekhaya lethu?
Roma 6:12-23; 12:1-3 Njengoko sizabalazela ukuba ngcwele, sifanele sisigqale njani isono neempembelelo zeli hlabathi?
Hebhere 12:12-17 Sinokubuphuthuma njani ubungcwalisa, okanye ubungcwele?